Shaqada iyo ganacsiga Vantaa - InfoFinland
Magaalooyin > Vantaa > Nolosha Vantaa > Shaqada iyo ganacsiga Vantaa
Shaqooyinka Vantaa laga helo
Cawinaad codsiga shaqada
Bogga Business Finland waxaad ka heleysaa ogeysiisyada boosaska shaqooyinka bannaanka ee Finland oo xirfaddaada ama laantaada aqooneed waafaqsan. Waxaa kale oo aad shaqo ka raadsan kartaa Vantaa.
Boosaska shaqada ee Vantaa laga heloFinnish | Iswidish
Adeegyada shaqaaloobidda ee Vantaa iyo Kerava waxay taageeraan shaqo-raadinta
Adeegyada shaqaaloobidda Vantaa iyo Kerava waxaad ka heleysaa hagitaanka shaqo-raadinta iyo macluumaad ku saabsan goobaha shaqada iyo waxbarashada ee furan. Haddii aad u baahan tahay talo iyo tusaale ku aaddan shaqaaloobiddaada ama waxbarashada, la xiriir adeegyada shaqaaloobidda ee magaalada Vantaa. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada magaalada waxaad ka heleysaa bogagga magaalada Vantaa.
Goobta dan qasashada ee adeegyada shaqaaloobidda Vantaa
Vernissakatu 1, dabaqa 1aad
Wuxuu shaqaynayaa Isniin-Jimco 9-16 saac
Telefoon 09 8395 0140
Adeegyada shaqaaloobidda ee Vantaa iyo Kerava Finnish | Iswidish | Ingiriis
Tijaabada degmada ee shaqaaloobidda ee Vantaa iyo KeravaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Haddii aad shaqo la’aan tahay, shaqo raadiye ahaan isaga diiwnaageli Xafiiska shaqada iyo meheradaha
Haddii aad shaqo la’aan tahay oo aad shaqo raadinayso, shaqo raadiye ahaan isaga diiwaangeli Xafiiska shaqada iyo meheradaha, yacni Xafiiska shaqada. Iska diiwaangeli xittaa haddii shaqada wakhti cayiman lagaa fariisiyay, waxbarashadaadu ay dhammaatay ama ay dhammaatay shaqadi mushaarkeeda lagaa taageerayay. Shaqo raadiye ahaan waxaad isu diiwaangelin kartaa adigoo isticmaalaya adeegyada shabakadda Xafiiska shaqada iyo meheradaha, adigoo tegaya Xafiiska shaqada ee kuugu dhow ama adigoo telefoon kula xiriiraya.
Xafiishka Shaqada iyo meheradaha ee Uusimaa, Vantaa
Vernissakatu 1, dabaqa 5aad
Isniin-Jimco saacadda u dhexeysa 9–16
Muwaadiniinta wadamada Midowga Yurub, Norway, Iceland, Liechtenstein iyo Switzerland waxay shaqo-raadiye ahaan isaga diiwaangelin karaan adeegyada shabakadda internetka ee Xafiiska shaqada iyo meheradaha. Muwaadiniinta wadamada kale waa in ay si shakhsi ah oo toos ah u tagaan isagana diiwaangeliyaan Xafiiska shaqada iyo meheradaha. Horay u sii qaado aqoonsi iyo sharciga deganaanshaha dalka.
Macluumaadka adeegyada Xafiiska shaqada iyo meheradaha waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Haddii aad shaqo la'aan noqotid. Macluumaad ku saabsan shaqo ka codsashada Finland waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Shaqo iyo ganacsi.
Adeegyada iyo macluumaadyada xiriirkaFinnish | Iswidish
Xarunta xeel-dheerayaasha Vantaa (Vantaan osaamiskeskus)
Haddii aad Vantaa deggan tahay, xaq aad u leedahay in aad Finland ka shaqeyso islamarkaasna aad tahay qof qaangaar ah oo Xafiiska shaqada iyo meheradaha macaamil ka ah, waxaad codsan kartaa adeegyada xarunta xeel-dheerayaasha Vantaa. Halkaas waxaad ku ogaan kartaa aqoontaada waxaadna hagitaan uga heli kartaa waxbarashooyinka iyo nolosha shaqada. Aqoontaada luqada Finnishkana waad ku horumarin kartaa. La xiriir khabiirkaada Xafiiska shaqada iyo meherada. Xarunta xeel-dheerayaasha Vantaa waxaa sidoo kale laga helaa koorasyo, waxbarasho iyo dhacdooyin u furan dadka kale ee dalka u soo guuray.
Xarunta xeel-dheerayaasha VantaaFinnish | Ingiriis
Mashruuc Tsempataan töihin
Waxyaabaha lagu taageero shaqaaloobidda dadka dalka u soo guuray ee Vantaa jooga waxaa ka mid ah mashruuca Tsempataan töihin. Mashruucu waa mid ay hirgelinayaan magaalada Vantaa, Xafiiska shaqada iyo meheradaha, shirkadda Sodexo Oy iyo ururada dadka dalka u soo guuray ee reer Vantaa. Shaqaalaha mashruuca waxaad caawimaad uga heleysaa codsashada shaqada, qoritaanka CV’ga iyo codisga shaqada, raadinta waxbarashada iyo su’aalaha la xiriira nolosha shaqada ee kale.
Adeegga macaamiishu wuxuu ku shaqeeya af Finnish, Ingiriis, Ruush, Carabi iyo Soomaali.
Mashruuca Tsempataan töihinFinnish
Mashruuca Tsempataan!Finnish | Ruush
Xarunta laqabsashada Monika
Luckan Integration waa adeeg la talin ah, kaas oo la talin shakhsiyadeed siiya dadka waddanka u soo guurey, wuxuuna qabtaa munaasabado la xiriida shaqo codsiga iyo guruubo shaqo codsi ah.
Shaqo ku hagida uu bixiyo ururka isbahaysiga dadku, waxaa loogu talogalay dadka waddanka u soo guuray oo horay waxbarashada u lahaa. Dariiqadan awgeed waxaad heli kartaa qof ku haga, kaas oo kaa caawinaya codsiga shaqada iyo kan waxbarashada ama sameynta shirkad ganacsi. Hawshan waxaa lagu qabanayaa luuqada Finnishka.
Haddii aad 30-sano ka yar tahay, waxaad la talin iyo hagitaan ka heli kartaa adeegga Ohjaamo. Shaqaalaha Ohjaamo ayaa ku caawinaya, haddii aad shaqo la'aan tahay ama aadan haysan goob waxbarasho.
R3 Urur dhalinyarada dadka waddanka u soo guurey waa urur, arimaha dhalinyarada wax ka caawiya, cawinaadaas oo la xiriirta xagga waxbarashada iyo shaqada. Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga internetka ururka.
Kaalmada da'yarka dalka u soo guurayFinnish
Adeegyada talabixinta ee ganacsiga la xiriira waxaa Vantaa la isugu keenay hal saqaf hoostiis oo ah Xarunta adeegga shirkadaha LeiJa. Daarta LeiJa waxaa ku shaqeeya adeegyada quu soo saarashada, YritysVantaa, Rugta ganacsiga, Yritysohjaamo, Shirkadaha vantaa iyo adeegyada shirkadaha ee Xafiiska shaqada iyo meherada. Qaabilaadaha Business Finland waxay ku shaqeeyaa Leija iyadoo ballan laga qabsanayo.
Haddii aad doonayso in aad shirkad samaysato, waxaad caawimaad ka heli kartaa xarunta adeegga shirkadaha ee Leija. Waxay kaa caawinayaa horumarinta firkadda ganacsiga ama qorshaha waxqabadka ganacsiga. Adeegyadu waa lacag la’aan.
Xarunta adeegga shirkadaha ee Leija
la-talinta shirkaddaFinnish | Ingiriis
Shabakadda Business Vantaa waxay ku caawinaysaa, marka aad dooanyso in aad shirkad ka aasaasto Vantaa, waxbarasho ka heshid, shaqaale ka qoroto, caalami noqoto ama aad xiriiro cusub hesho. Adeegyadu waa lacag la’aan.
Waxaad la xiriiri kartaa Business Vantaa adigoo wacaya lambarka talabixinta ee Infada oo ah 09839 20000, Isniin-Jimco 8–15.30.
Adeegyada ganacsatada loogu talagalayFinnish | Iswidish | Ingiriis
NewCo Helsinki wuxuu bixiyaa talabixin shakhsi ah oo ku saabsan aasaasidda shirkadda, wuxuu Helsinki ku qabanqaabiyaa munaasabadu warbixineed iyo tababarada ganacsatada oo ku baxaya luqado kala duwan.
Haddii aad shirkad ku leedahay Vantaa, waxaad ku biiri kartaa oo aad xubin ka noqon kartaa Ganacsatada Vantaa. Ururka Ganacsatada Vantaa waa urur ilaaliya danaha ganacsatada, kaas oo xubnihiisa siiya tusaale ahaan tababarro iyo talabixin. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda ururka.
Ururka ilaalinta danaha shirkadleydaFinnish
Xafiiska shaqada iyo meheradaha ee Uusimaa wuxuu adeegyo noocyo badan siiyaa qofka ka fekeraya in uu ganacsi samaysto ama ganacsadaha cusub. Xafiiska shaqada iyo meheradaha ee Uusimaa waxaad uga qaybqaadan kartaa tusaale ahaan tababarada ganacsatada waxaad ka codsan kartaa lacagta billowga ganacsiga ee loogu talagalay shirkad aasaasidda.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: Shirkad ganacsi ku samaynta Finland.
Xafiiska canshuurta ee soonaha Caasimaddu wuxuu ku yaalaa bartamaha Helsinki.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: Canshuurid
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 15.09.2021 Boggan war-celin ka soo dir